यस पटकको मेरो भारत भ्रमण खासगरी मोदीलाई बधाई दिने, कार्यकाल सफल रहोस् भनेर शुभकामना दिने, उहाँको सपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुने उद्देश्यका साथ म भारत आएको हुँ । त्यसकारण धेरै कुराहरुको छिनोफानो गर्ने, द्वीपक्षीय प्रश्नहरुमा धेरै अल्झिने खालको थिएन । शुभकामना आदान प्रदानजस्तो कुरा हो । त्यसकारण अहिले भर्खर चुनावपछि सरकार बन्दै गरेको, उहाँहरु व्यस्त रहेको अवस्थामा आपसी सम्बन्धलाई (जो हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्ध छ) त्यसलाई अझ प्रगाढ बनाएर लिएर जाने, आगामी दिनमा सम्बन्धलाई अझ निकट बनाएर लिएर जाने सम्बन्धमा छलफलहरु भए ।
केही विषयहरु चल्तेचलाते सन्दर्भमा उठेका मात्रै हुन् । अरु कुरा हामीले पछि उपयुक्त समयमा गरौंला । र, खास च्यानलहरुमार्फत गरौंला भनेर धेरै विषयहरुमा प्रवेश गरेनौं । हामीले मित्रताका कुरा गर्‍यौं । शुभकामनाका कुरा गर्‍यौं । र, दुई देशबीचका सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्‍यौं ।
तपाई नेपाली जनताले मन पराएको नेता हो । तपाईसँग दुई तिहाई मत छ । तपाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हो । र, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि जनताको प्रचण्ड बहुमतबाट प्रधामन्त्री बन्नुभएको छ । तपाई र मोदीबीच केमेष्ट्री मिलेको छ । अब सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भनेर धेरै भन्न थालेका छन् । के अब साँच्चिकै नेपालले विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न लागेको हो ?
अवश्य नै । म प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्थाबाट सप्रिएको छ । र, सप्रिँदै गएको छ । पारस्परिक विश्वासको वातावरण बनेको छ । र, अहिले मोदीजी र मैलेपनि धोकापूर्ण ढंगले कुरा गर्ने अथवा छलछामपूर्ण कुरा गर्ने गरेका छैनौं । परस्परमा मन खोलेर कुरा गर्ने गरेका छौं । समस्याहरु राख्ने कुरा गरेका छौं । समस्याहरु समाधान गर्ने कुरा राख्ने गरेका छौं । त्यसकारण सम्बन्ध नयाँ उचाईका साथ र नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा कुनै द्विविधा छैन् ।
तपाई एकदमै भिजन भएको नेता हो । मोदी पनि भिजन भएको हो राजनेता । तपाई र मोदीबीच आजपनि भेटवार्ता भएको थियो । साँच्चिकै अहिले दाबी गरिएजस्तै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर र नयाँ उचाईमा पुगेको हो ?
अवश्य नै । अहिले हाम्रो बीचमा समस्याहरु छैनन, तर विषयहरु छन् । ती विषयहरु पनि कुरा गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । त्यही ढंगले कुराकानी भएको छ । र, कुराहरु अगाडि बढाउँदै जाने र समस्याभन्दा पनि विषयहरु जो छन्, ती सबैलाई कुराकानीको माध्यमबाट टुँगो लगाउनेबारे कुराकानी भएको छ ।
त्यो प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको निर्णय के रह्यो भने पहिले यो प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने । र, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने । उहाँहरुले त्यो समझदारी बनाएको हुनाले उहाँहरु भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा हुनुहोला । किनभने यसबीचमा चुनाव भयो । अहिले सरकार बन्ने सिलसिला, मन्त्रीहरुको जिम्मेवारीको बाँडफाँडको सिलसिला सबै भएको बेला यस विषयले त्यस्तो तात्कालिक बढी महत्व नपाउनु एउटा कुरा हो । तर, अब भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कुराको तयारी उहाँहरु गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छ ।
यसबारेमा कुरा हुनुपर्ने विषय होईन । किनभने त्यो बुझाउन मात्रै बाँकी हो । बुझाउनको लागि ईपिजीले आफैं समय लिएर बुझाउने कुरा हो ।
तपाई दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ? तपाईले आफ्नो भिजनलाई साकार पार्नको लागि भारत, चीन, अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियनलगायतका देश, र पार्टीभित्रै र बाहिरबाट सहयोग पाउनुभएको छ ?
मोदी, सि जिनपिङसँग यहाँको अत्यन्तै प्रगाढ सम्बन्ध छ, नेपालको विकासमा उहाँहरुको साथ र सहयोग लिने दूरदर्शी भिजन र जादुको छडी तपाईसँग छ त ?
उसो भए यतिबेला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कुनै दरार छैन ? सबै राम्रो भएको हो ?
यो अहिलेको कुनै विषय नै होईन, जुनबेला म विदेश भ्रमणमा हुन्छु त्यसबेलामा कुनै न कुनै यस प्रकारका कुरा निस्किन्छन् । स्थिरता भनेको नीतिमा हो । स्थिरता भनेको बहुमतको सरकारमा हो । र, स्थिरता भनेको नेताहरुका बीचको सहमति र सहकार्यको कुरा हो । यसलाई अनेक ढंगले टिप्पणी गरिरहनुपर्ने, उछालिरहनुपर्ने यो हाम्राबीचमा के कुरा भएको छ ? भनेर उचालिरहनुपर्ने आवश्यकत्ता नै छैन् । जुन कुरा, यो कुनै नयाँ कुरा त होईन । गत वर्ष हामीले जुन सहमति गर्‍यौं । पार्टी एकता गर्‍यौं । त्यो कुरा त कुनै नयाँ कुरा होईन । अहिले आएर बेलुन बनाएर फुकिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकत्ता नै छैन् । त्यो त गत वर्षको सहमति हो । गत वर्ष नै सार्वजनिक भैसकेको कुरा हो । अब यसलाई चाहीँ नयाँ विषयजस्तो गरेर उचालेर ठूलो समस्या आईपर्‍योजस्तो गरेर यसलाई एउटा जनतामा सबैतिर कार्यकर्तामा आशंका र सन्देह पैदा हुनेगरी चर्चा गर्नुपर्ने नै विषय होईन ।
यसमा म अहिले छलफल गर्न चाहन्नँ । यो सहमति के कस्तो भएको हो ? भन्ने कुरा सहमतिमै उल्लेख छँदैछ । र, अभिप्राय के हो ? भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ । यतिबेला यो चर्चा गर्ने, मैले आज बिहानपनि एउटा सञ्चारमाध्यमलाई भनें तपाईहरुलाई खुशी लाग्छ भने म चार पाँच दिनमात्रै हो, चार पाँच दिनपछि हटिहाल्छु भन्दिन्छु । देशको विकासप्रति चिन्ता नहुने, त्यसतर्फ बहस नगर्ने, विकास कसरी हुन सक्छ ? स्थिरता र स्थायित्व कसरी हुन सक्छ ? त्यतापट्टि नहुने । मलाई आश्चर्य लाग्छ । हरेक कुराको विरोध हुनुपर्ने । नराम्रो भन्नुपर्ने । यस देशलाई माया गर्ने र देशलाई राम्रो होस भन्ने कुरा खोई ? कतिपय मान्छेहरुको प्रवृत्ति म देखिरेको छु, त्यसमा मेरो खास टिप्पणी केही पनि छैन् ।
चिसोपन कहाँ आएको छ? कसैले सोध्यो होला । हाम्रा बीचमा सहमति नभईकन त पार्टी एकता भएको छैन् । एकता गर्दा केही सहमतिका पक्षहरु छन् । केही सहमतिहरु भएर नै एकता भएको हो । र, एकता भएपछि एकताबद्ध रुपमा पार्टी अघि बढेको छ । त्यसलाई कमजोर पार्नेगरी, एकता खलबलाउने गरी केही चर्चा गर्नुपर्ने त आवश्यकत्ता छैन् । जे सहमति भएका छन् । ती सबै आफ्नो बाटोमा र कोर्समा अघि बढ्छन् ।
(शुक्रबार भारतबाट स्वदेश फर्कनेक्रममा विमानमै पत्रकार ऋषि धमलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)